5 UHLAHLO-LWABIWO MALI LWETUXEDOS UYAKUYITHANDA - IFASHONI
Eyona Ifashoni 5 I-Tuxedos yoMyeni kuHlahlo-lwabiwo mali
5 I-Tuxedos yoMyeni kuHlahlo-lwabiwo mali
Ukusuka kumnyama weklasikhi ukuya kwitartan ethandwayo, safumana ezona tuxes zishushu kumyeni oqonda uhlahlo-lwabiwo mali.
I-tuxedos zokuqeshisa kunye nohlahlo-lwabiwo mali azibonakali ngathi ziqhelekile. Kudala zahamba i-boxy silhouettes kunye neekitschy cummerbunds zeepenguin-suit ezidlulileyo. Iindawo ezintsha zokurenta ezinje ngeBlack Tux zibonelela ngee-tuxes ezilungelelanisiweyo kwii-shades ezintsha ezishushu ezifana ne-blueberry kunye negrey. Kwimarike yokuthenga? Iindawo zokulungiselela ukunxiba osele uzazi kwaye uzithanda njengoTopman kunye no-ASOS banokhetho olothusayo lwefomulaar efikelelekayo yomyeni wefashoni.
Jonga ii-tuxedos zethu esizithandayo kumyeni kuhlahlo-lwabiwo mali olungezantsi!
Ngomtshato wesintu omnyama womtshato kwisimo esisemthethweni njengebhola yegumbi, akukho nto ngaphandle kwe-tuxedo emnyama kwi-classic cut iya kwenza.
Tuxedo, $ 230, MensWearhouse.com
I-Tlimedo encinci yeSlim-Fit
Isitayile esinciphile somzuzu sinobuhle obucekeceke kodwa sisakhazimla ngokwaneleyo ukulungiselela umsitho osesikweni. Khetha abamnyama bemveli ukongeza isibheno esingapheliyo.
amakhonkco akhe okuzibandakanya
Tuxedo, $ 181, ASOS.com
I-tux ebukhali elungele umthunzi opholileyo ongwevu ilungele ixesha lasemini okanye umcimbi wangaphandle. Gcina iklasikhi ngezixhobo ezimnyama okanye ungeze ulonwabo nge-bowtie enemibala.
Tuxedo, $ 110 ukurenta, TheBlackTux.com
Umbala o-blue blue hue wongeza ukuqaqamba kwefashoni kwi-tux ephefumlelweyo egcwaliswe ngekhola yeshawl. Bhangqa ngesikwere seepokotho esineepatheni kunye neekawusi ukutyhala imvulophu nangakumbi.
Tuxedo, $ 200, UkulwaGent.com
Ukuba umbala wombala kwi-tie yakho okanye kwiikawusi awonelanga yingxelo, jonga i-tux eprintiweyo enje ngohlobo olufihlakeleyo oluhlaza. Ingcebiso yepro: Bambelela kwizixhobo ezilula ze-monochromatic ezingayi kukhuphisana nepateni enesibindi.
ITuxedo, i $ 475, Topman.com
Thenga ii-tuxedos apha!
nguwuphi lo msesane
indlela yokucoca amakhonkco egolide amhlophe
ukusebenzisa nini ms okanye ukuphoswa
ukuba uza kunxiba ntoni ukuwa umtshato
ngasemva ipatio yamatye